Mandoko Tantara Iray Vaovao: Taokanto Sohrai Ao Jharkhand · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Desambra 2017 5:48 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Français, नेपाली, Italiano, English
Ohatra maromaro ahitàna ny Hosodoko Sohrai. Avy amin'ny Pejin'ny Taokanto Tribal tao Hazaribagh, avy amin'i Bulu Imam
Ity lahasoratra ity dia nosoratan'i Alankrita Anand, ary nivoaka voalohany tao amin'ny Video Volunteers, Ilay fikambanana ho an'ny filazambaovao manana ny biraony ao India ary efa nahazo loka iraisampirenena Ity lahatsoratra nasianà fanamboarana avoaka manaraka ity dia fiarahana miasa amin'ny Global Voices.
Ny Sohrai sy Khovar, ireo karazana taokanto nentim-paharazana avy ao amin'ny firenena Indiana ao Jharkhand, dia fanehoana ny fombandrazana iangalian'ny vehivavy. Tato anatin'ny taona visivitsy izao, nahazo toerana manokana mihitsy ireo karazana taokanto ireo satria ny Departemanta misahana ny taokanto sy ny Kolontsaina avy amin'ny fanjakana mihitsy no nampiantso ireo mpanakanto sy ireo manampahaizana manokana avy amin'ny foko mba handoko ireo tranompanjakana, ireo fiantsonan'ny fiarandalamby, ary ireo seranam-piaramanidina amin'ny alalan'ny sary fanao an-drindrina maro loko. Manome lanja ireo mpanakanto avy amin'ny foko izany fihetsika izany, ary koa mamerina indray ny fitokisantenan'izy ireo.
Ny taokanto Sohrai dia ilay taokanton'ny Fetiben'ny (Fijinjana) Sohrai. Noforonina avy amin'ny fotaka teny amin'ny rindrim-potak'ireo trano tao Jharkhand https://t.co/yjrR4Peu8s pic.twitter.com/88rEU7Iu6m
Ny taokanto Sohrai dia nomena io anarana io avy amin'ny Fetibem-pijinjana mitovy dika aminy manodidina ny Diwali. Mandritry ny fotoam-pijinjana, manadio ny tranony sy ny rindriny avy ny vehivavy isan-tokatrano ka mandoko ny rindriny amin'ny taokanto Sohrai. Ny tena mampiavaka ity Taokanto tranainy ity dia noho izy vehivavy fotsiny no manao azy. Ny Sohari no mampiseho ny fivoaran'ny kolontsaina, ary ny Khovar, na koa hoe Hosodoko natao tamin-drantsana, dia maneho ny fanambadiana sy ny fiterahana ary efa fanao rehefa misy fampakarambady.
Miaraka amin'ireo siny kely feno loko natoraly, azo avy aminà karazana tany sy vato, manao soritra voakaly eo amin'ny rindrina i Putli Devi ilay mpanakanto Sohrai fandadaza, raha mbola eo ampiresahana aminy momba ny endrika taokanto ataony ilay solontenan'ny vondrom-piarahamonina Basanti Soren.
Marihan'i Putli Devi ao anatin'ilay lahatsary fa :
Ny tena mampiavaka io karazana taokanto io dia noho izy vehivavy fotsiny no manao azy ary vehivavy no mampita azy, ary azo isaina amin'ny rantsan-tonana ry zareo amin'ìzany. Avy amin'ny vondrom-piarahamonina Kurmi ny ankamaroan'izy ireo ary mipetraka ao Hazaribagh
Lehibe tao Chotanagpur, Hazaribagh i Putli Devi ary nijery ireo sary an-drndrina nataon'ny reniny tamin'ny rantsan-tanany sy nianatra io karazana taokanto io koa.
Mazàna aho mahita alika dia sy saka dia mitondra akoho mandositra any anaty ala any, ka dia nanomboka naneho azy ireny tanaty sary hosodoko.
Ahitàna loko mena, mainty, mavo ary fotsy ireo hosodoko, misy sarinà biby tsy hita isa ihany koa. Hoy Devi:
Mandoko avy amin'ny tadidy aho, zavatra hitako nandritry ny fahazazako ary zavatra hitako manodidina ahy
Kanefa, matetika i Putli sy ireo mpanakanto mitovy aminy no tsy ankasitrahan'ny olona amin'ny asany, tsy manao izany hitadiavam-bola ihany koa izy ireo. Na izany aza, mientan-kafaliana ihany i Putli mahiata ny asany aranty any amin'ireo firenena tahaka ny Aostralia sy Alemaina.
Indray andro, tonga avy any i Bulu Imam ary tena nankafy ny sary nataoko. Niahotra ihany aho ny hihaona aminy, kanefa tena nisisika mafy ireo zaobaviko. Nandrisika ahy hanao sary ambony taratasy izy ary nitondra ireo sary nataoko ho hitan'izao tontolo izao
Mpitia zava-boahary miasa ho amin'ny Fiarovana ny taokanto sy ny kolontsaina netim-paharazana ao Jharkhand i Bulu Imam , 75 taona . Manazava izy hoe :
Ireo vahoaka zavimba teratany, manerana izao tontolo izao, dia manana ny zony eo amin'ny tany efa nipetrahany ara-tantara, kanefa ny ao India, misy fetrany ihany ireny zo ireny.
Nofidian'i India ny handany ilay lalàna avy amin'ny Firenena mikambana miaro ny zon'ny vazimba teratany (UNDRIP) saingy tsy ankasitrahany ilay fiantso hoe ‘vazimba teratany’, izay no mahatonga ilay lalàna ho sarotra ampiharina ao India.
Eny an-kianja, hita soritra amin'ny fanitsakitsahana ny zon'ireo vazimba teratany izany. Imam, ohatra, dia manambara fa raha toa ny vazimba teratany Indiana na ny Adivasis ka miankina amin'ny taniny mba ho velona, dia tsy manana zo amin'ny “vokatra ambanin'ny tany” kosa ry zareo. “Resaka fitrandrahana no tiko holazaina” hoy izy, raha nilaza ireo harena ankibon'ny tany misy ao amin'ny faritra Chotanagur.
Mifandray be amin'ny maha-izy azy sy ny zo ny resaka taokanto sy kolontsaina vazimba teratany. Hoy i Imam:
Nahita porofo'nny maha-vazimba teratany an'ireo adivasia ao Jharkhand aho tao ny anatin'ny taokanton'izy ireo, ireo lavabato ao amin'ny faritra voahaingo taokanto mitovy amin'io efa an'arivo taona maro tany aloha tany. Koa raha tiana hahazo ny zony ireo vazimba teratany ireo, tsy maintsy apetratsika ny hoe ara-tantara dia efa niaina ela teo amin'ilay tany izy ireo
Basanti, izay avy aminà vondom-piarahamonina ara-poko koa, dia mahatsapa fa tena zava-dehibe ny fitandroana ny taokanto sy ny kolontsain'ny tena.
Ny taranaka aty aoriana dia tsy mahalala loatra ny tantarany, izay no ilazana fa zava-dehibe ny fahampahafantarana ny kolontsaina eo an-toerana. Tsy maintsy tonga saina amin'ny fomban-drazantsika isika, resaka maha-ianao anao.
Devidas Gaonkar, mpiaramiasa iray izay manao fanadihadiana momba ireo kolontsain'ny vazimba teratany ao Goa, dia mahatsapa zavatra mitovy amin'izany ihany koa mikasika ny kolontsaina, ny taokanto ary ny mari-panodroana.
Ankehitriny ny taokanto Sohrai dia fantatry ny maro hoe taokantom-pirenen'i Jharkhand. Nahazo ny fankasitrahana avy amin'ny Governemantam-panjakana sy ireo vondron'orinasa izy io, toy ny Tata Steel izay manana ny biraony ivelan'ny fiadidian'ny fanjakana. Ankehitriny ireo fiantsonan'ny fiaradalamby any an-drenivohitra toy ny ao Hazaribagh sy Jamshedpur dia mandray ireo vahiny amin'ireo sary an-drindrina Khovar sy Sohrai izay zavatra tsy hita raha tsy teny amin'ny tranon'ireo tantsaha hatrizay.
Sary hosodoko Sohrai nataon'ireo mpanakanto avy amin'ny foko @hazaribagh teny amin'ny fiantsonan'ny fiarandalamby pic.twitter.com/tGdLdR0Ums
#SoMuchToDo #SMTDranchi Aza adino “Taoklanto Sohrai” an-drindrina eo amin'ny Rindrina amin'ny havianao rehefa iny ianao miainga avy ao amin'ny seranam-piara-manidina Birsa Munda ho any an-drenivohitra iny pic.twitter.com/kFQ82398rN
Sary maromaro kokoa mahafinaritra ahitàna taokanto Sohrai avy ao Hazaribagh tonga hatreny amin'ny seranam-piaramanidina Ranchi. Avy ao Barkagaon sy Katkamsandi ireo mpanakantontsika manana talenta ireo. pic.twitter.com/C3AJdpnRE5
Moa ve ny fitondrana ny karazana taokanto avy amin'ireo tanana kely maro ho aminà sehatra erantany sy ny sehatry ny varotra nitondra fahombiazana ho an'ireo mpanao azy? Nilaza i Basanti fa tena nitondra fivoarana ara-bola teo amin'ny fiainan'i Devi tokoa izany kanefa tsy dia be loatra ary tsy misy olona liana hianatra azy intsony. Imam kosa nilaza fa ny fahasamihafana hitany nentin'io teo amin'ny fiainan'i Devi dia izy lasa nahafantatra ny lanjan'ny fiaviana sy lasa nahatoky tena kokoa. “Tsy voavidim-bola izany” hoy Imam.
Video Volunteers no hany seha-panadihadihana ao India miompana manokana amin'ny fanomezana fandrakofana midadasika ny vaovao avy amin'ny faritra mahantra indrindra,sy lavitra andriana indrindra ao India .